I-cottage enemibhede engu-8 ene-sauna nokubukwa kwentaba okumangalisayo
Ekotishi lethu i-Skierfe 1179 ulala izingcezu eziyi-8, ihlukaniswe ngamakamelo amabili okulala kanye nendawo yokulala ethokomele. Ikotishi lakhiwa ngo-2014 futhi elinendawo yokuhlala engu-72 m² + libanzi futhi liyakhanya. Lapha ungakwazi ukujabulela i-sauna yakho kanye nethala elikhulu elinemibono emihle yezwe lezintaba.
Ikotishi linekhishi elikhulu elihlanganisiwe negumbi lokuhlala. Ikhishi linezitsha nakho konke okwekhishi. Igumbi lokuhlala line-TV yesikrini esiyisicaba kanye namafasitela amakhulu abheke ithala kanye nokubukwa okuhle.
Kunamakamelo okulala amabili nendawo yokulala enemibhede emibili eyodwa. I-master bedroom inombhede ophindwe kabili onethezekile kanti ikamelo elincane linemibhede emibili eyisigqiki. Wonke amagumbi okulala afakwe amaduvethi nemicamelo, kodwa ilineni lombhede namathawula yinto isivakashi esinomthwalo wemfanelo ukukulethela yona.
Ngaphezu kwalokho, i-Skierfe 1179 inikeza amagumbi okugeza amabili. Endlini yokugezela enkulu uyakwazi nokufinyelela ku-sauna yakho yangasese, futhi inikeza umbono ongakholeki!